All freaks taam kuwaas oo ay ku xiran tahay dhaqanka ee taam joogi aad u og muhiimadda ay leedahay yoga. Yoga waa dhan oo ku saabsan qaabka, halkii asanas yoga inay u badan saxda ah. Haddii aad rabto in aad gaadhaan lacagta ugu badan ka yoga, waa inaad hubisaa in aad qaab waa xaq. Si aad u hesho qaab sax ah iyo in la hubiyo in aad dib u Toosan inta aad samaynayso asanas yoga Jiifa on dhabarka, derin yoga waa mid wax tar leh.Haddii aad tahay qof wareersan oo ku saabsan in aad u baahan tahay derin yoga ama derin oo waa in aad ka iibsan, waxaan leenahay xal kuu. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha waa in aad leedahay mid ka mid ah, noocyada kala duwan ee dermaha yoga iyo kuwa ugu fiican waa in aad soo qaado: -
Maxaad derin yoga waa kuu fiican yahay?
derin yoga A idin siinayo oo aad meel yoga shakhsiyeed. Haddii aad barbaranayso yoga ee park dadweynaha, la qeexo aad meel iyadoo la kaashanayo derin ah ka hortagtaa galidda dadweynaha degaanka oo aad samayn karto oo aan yoga rabshooyin kasta.
Waxa uu ka kooban yahay qalab ah anti-taraarax. Hadaba, waxa aad ka hortagi doonaa dhexdeeda Godoo kale sabab u dhididka taasoo keentay in dhaawac fudud halka fulinta asanas yoga ah
derin yoga A had iyo jeer waxay noqon doontaa saaxiibkaa saaka a roobaadka. Haddii ay soo daateen habeenkii oo dhan iyo cawska cawska waa qoyan, fulinta yoga sariiro yoga gaar ah sii dayn doonaa inaad sii wadato yoga aan qaadan qoyan.
Noocyada dermaha yoga
dermaha yoga dhegdheg
Kuwani waa dermaha yoga anti-taraarax in ay yihiin wanaagsan bilowga ah kuwaas oo aan haysan xadiditaan badan jidhkooda halka fulinta asanas yoga. Waxay xitaa wanaagsan kuwa dhididka badan si ay u ma ay simbiriirixan yihiin.
dermaha yoga Safarka
Kuwani waa iftiin in miisaanka iyo fududahay in la laalaabo si aad ku qaadi kartaa in aad la meel kasta oo aad u safarto. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku wanaagsan in la isticmaalo maalin kasta ma aha.
dermaha yoga caag Dabiiciga ah
Waayo, kuwa doonaya in la yareeyo ay ka qayb qaateen dhinaca wasakhaynta deegaanka, dermaha yoga kuwanu waa kaamil ah. Tan iyo markii ay ka samaysan yihiin waxyaabaha dabiiciga ah, dermaha kuwanu waa ammaan loogu talagalay dadka maqaarka xasaasi ah.
Xidhmeen derin yoga
The dermaha yoga dhaqanka loo isticmaalaa in laga sameeyo xidhmeen sababta oo ah qayb aasaasi ah ee dabiiciga ah. Waxay sidaas ma aha waarta, laakiin waxay noqon doontaa doorasho wanaagsan haddii aad raadinayso ikhtiyaarka kharash-ool ah
Cotton derin yoga
Kuwani waxay ka samaysan yihiin dhar suuf qaro weyn oo wanaagsan kuwa jecel yihiin in kasta oo hadda ka dibna ku dhaq lahaayeen. Waxa kale oo doorasho kharash-ool ah si ay u eegaan.
waqti Post: Oct-24-2018